Asturnaanta – Red Sea Energy
Asturnaantu waa xaq u lahaanshaha asturnaanta iyo xaq u lahaanshaha go’aan ka gaarista macluumaadka shaqsiyeed ee qofka.
Macluumaadka shaqsiyeed waa macluumaad iyo qiimeynno lala xiriirin karo shaqsi
Tamarta Badda Cas waxay ka shaqeysaa macluumaadka shakhsiga ah ee la xiriira gudbinta awoodda iyo wax soo saarka kale iyo adeegyada shakhsiyaadka iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay, iyo sidoo kale markaad booqato degelkeenna www.redsea.energy.
Waxaan u tixgalineynaa arimaha gaarka ah waxaanna ka walwalsan nahay ilaalinta sharciga asturnaanta si macluumaadka shaqsiyadeed ay u ahaadaan kuwa cusub isla markaana loo ilaaliyo sirta.
Qoraalkan asturnaanta wuxuu ku siinayaa macluumaad ku saabsan waxa macluumaadka shakhsiyeed la ururiyey, sida loo ururiyey iyo xuquuqda aad leedahay marka macluumaadkaaga shaqsiyeed ee adiga kugu saabsan laga diiwaan geliyo. Agaasimaha guud ayaa ugu horreyn mas’uul ka ah ka shaqeynta xogta shaqsiyadeed.
Waa maxay ka shaqeynta xogta shaqsiyadeed ee aan sameyno?
1. Macluumaadka macaamiisha
Waxaan ka baaraandegnaa macluumaadka shakhsiga ah ee lagama maarmaanka u ah keenista badeecooyinka iyo adeegyada adiga macaamiil ahaan ama macaamil macquul ah. Diiwaangelinta macluumaadka shakhsiga ah ayaa shuruud u ah keenistayada.
Macluumaadka la shaqeynayo waxaa ka mid ah magaca, lambarka dhalashada, cinwaanka dhirta, cinwaanka qaansheegta, cinwaanka e-maylka, taleefanka gacanta iyo macluumaadka ku saabsan wax soo saarka iyo adeegyada aad naga iibsato, sida isticmaalka korontada halkii. muddo iyo ka badan.
Lambarka dhalashada ayaa aasaas u ah cusbooneysiinta magaca, cinwaanka, nambarka boostada iyo cinwaanka boostada ee laga helo Diiwaanka Tirada Dadka.
2. Xiriirka elektarooniga ah iyo diiwaangelinta dhacdooyinka
Waa suurtagal in lagu qoro isgaarsiinta elektiroonigga ah halka aan ku soo bandhigno macluumaadka iyo dalabyada hadda jira. Kani waa ikhtiyaari oo macnaheedu waa inaad tan ku hesho per. emayl ama fariin qoraal ah. Si loo helo isgaarsiinta elektiroonigga ah, waxaa lagama maarmaan ah in laga diiwaan geliyo cinwaanka e-maylka / taleefanka gacanta boggeyga.
Waad ka noqon kartaa ogolaanshahaaga isgaarsiinta elektaroonigga ah wakhti kasta, boostada waa la joojin doonaa.
Xaaladaha dhacdooyinka looga baahan yahay dhacdooyinka u baahan diiwaangelinta, diiwaangelinta elektaroonigga ah waxay u baahan doontaa oggolaansho diiwaangelin.
3. Adeegsiga aaladaha gorfaynta, buskudka iyo farsamada kale
Cookie waa feyl yar oo qoraal ah oo la soo dejisto laguna keydiyo kombuyuutarkaaga markii websaydhka la furo. Waxaan u adeegsanaa cookies si aan u soo aruurino tirakoobka oo aan ugu cabirno taraafikada bogga. Cookie-ku kuma jiro cinwaan IP ah noloshiisana waxtarka leh waa 6 bilood haddii aadan tirtirin. Waad dejin kartaa biraawsarkaaga si kaliya bogagga internetka ee aad rabto loo oggolaado inay ku keydiso buskudka kumbuyuutarkaaga. Waxaan kugula talineynaa inaad isticmaasho mashiinka wax raadinta oo aad raadiso «gab buskudka» si aad ugu hesho cunto karinta biraawsarkaaga gaarka ah. Fadlan ogow in xaddidaadda marin u helka ‘cookies’ ay saameyn ku yeelan karto shaqeynta boggeena internetka.
Waxaan u soo aruurineynaa tirakoobka booqdayaasha joogtada ah boggeena internetka iyadoo la adeegsanayo Google Analytics. Tan waxaa ka mid ah boggeena la akhriyay, waqtiga, bogga aad ka timid, juqraafi ahaan, iyo sidoo kale nooca biraawsarka iyo nidaamka hawlgalka loo adeegsaday. Waan arki karnaa Aqoonsigaaga isticmaaleha haddii aad gasho Boggeyga, laakiin adiga kuguma xiriirinno macluumaadka la soo sheegay qof ahaan. Dhammaan xogta tirakoobka waa la tirtirayaa 36 bilood ka dib.
Istaatistikada iyo xalalka kale ee tikniyoolajiyadda, oo kaliya uruuriya macluumaad aan la aqoon, waxay naga caawinayaan inaan si isdaba joog ah u hagaajino boggeena, isla markaana noo sheegto bogagga ay tahay inaan ahmiyadda ugu badan siino iyo kuwa la tirtirayo.
4. Bixinta macluumaadka shaqsiga ah
Macaamiisha iibsada quwadda korontada, macluumaadka shakhsiga ah qaarkood waxaa lagu wareejinayaa shirkadda shabakadda ee mas’uulka ka ah shabakadda korontada cinwaanka warshadda. Laga bilaabo Maajo 2018, tan waxay si toos ah ugu dhici doontaa milkiilaha shabakadda, halka rubuca hore ee sannadka 2019 tani lagu beddeli doono diiwaan cusub oo qaran, ELHUB, kaas oo noqon doona diiwaangelin guud oo ah isku xirka ka dhexeeya dhammaan shirkadaha korontada bixiya iyo milkiilayaasha shabakadda. .
Macaamiisha galay heshiisyada alaabooyinka iyo adeegyada kale (laga bilaabo dukaanka qadka, ka qaadista gawaarida korontada, nidaamyada sawir qaadista, xalalka guryaha ee caqliga ah ama taleefanka gacanta), macluumaadka shaqsiyeed ee qaaska ah waxaa lagu wareejin karaa qandaraaslayaal hoose oo la xiriira rakibaadda iyo / ama howlgalka badeecadaha / adeegyada noocaas ah.
Xogta waxaa loo gudbiyaa foom si qarsoodi ah ENOVA iyadoo lagu saleynayo macluumaadka laga soo ururiyey macaamiisha galay heshiis ku saabsan kaqeybgalka mashruuca tijaabada ah ee ENOVA Mashruuca tijaabada ah wuxuu qiimeeyaa saameynta ka dhalan karta warbixinta waqtiga dhabta ah ee isticmaalka korontada iyadoo lala xiriirinayo xalalka guryaha.
5. Tirtirida xogta
Ka dib soo bandhigida ELHUB waxaa la dhammeeyaa sanadka 2019 (diiwaanka guud oo ah isku xirka mulkiileyaasha shabakadaha iyo kuwa keena korontada), waxaan ku kaydin doonnaa macluumaadkaaga dejinta seddex sano ka dib dhammaadka xiriirka macaamilka iyadoo la raacayo Xeerarka Sharciga Tamarta ee wax ka beddelaya xeerarka awoodda iibka iyo adeegyada shabakadda. Macluumaadka kale ee shakhsi ahaaneed ee xiriirka macaamiisha ayaa la keydiyaa 5 sano ka dib markii qaan-sheegashada la dhammaystiray si waafaqsan Sharciga Xisaabaadka. Ilaa dhammaan howlaha dejinta ee la xiriira muddada ka horraysa hirgelinta ELHUB la dhammaystiro
a, macluumaadka taariikhiga ah lama tirtiri doono iyadoo ay ugu wacan tahay danta sharciga ah, iyadoo laxariirta u badalashada akhrinta mitirka otomaatiga ah, ismaandhaafyo ayaa lagu ogaan karaa inta udhaxeysa qaansheegadka / shuruudaha iyo akhriska mitirka dhabta ah taasoo u horseedi karta sheegashooyin dheeri ah ama lacag celin.
Xiriirka kale ee macaamiisha
Macluumaadka shaqsiyeed ee laxiriira cilaaqaadka kale ee macaamilka waa la keydin doonaa ilaa iyo inta uu adeega socdo ama cabashada ay dhamaatay. Macluumaadka waxaa lagu keydin doonaa ugu yaraan 5 sano laga bilaabo waqtiga iibka si loo buuxiyo shuruudaha ku haynta sharciga Xisaabaadka.
Nidaamkeenna xogta shakhsiga ah waxaa nidaamiya sharci cusub oo xog shaqsiyeed kaas oo ku saleysan nidaam wadajir ah oo ka socda Midowga Yurub. Xuquuqdaada laxiriira ka shaqeynta xogta shaqsiyadeed waxaa lagu sheegay, iyo waxyaabo kale, Sharciga Xogta Shakhsiyeed / Qodobbada 15-19 ee Xeerka. Xuquuqda ugu muhiimsan waxaa lagu soo bandhigay hoos.
1. Xaqa helitaanka
Qof kastaa wuxuu dalban karaa inuu ogaado waxa ka baaraandegidda xogta shakhsiga ah ee aan fulino, iyo sidoo kale macluumaadka aasaasiga ah ee ku saabsan howshan. Macluumaadka noocan ah waxaa lagu bixiyay bayaanka asturnaanta.
Haddii aad ka diiwaangashan tahay nidaamyadeenna, waxaad xaq u leedahay inaad ogaato macluumaadka laga diiwaangeliyey ee adiga kugu saabsan iyo isha ay macluumaadka shakhsiga ahi ka timaaddo, xaaladahaas macluumadka ah ee macluumaadkaagu aanu adigu bixin. Waxaan ku siineynaa helitaanka macluumaadka ku saleysan baaritaanka qoraalka ah, eeg macluumaadka xiriirka halkan hoose.
Waxaad dalban kartaa in qofka xukuma xogta uu si faahfaahsan u sharaxo macluumaadka sida kor ku xusan ilaa inta ay tani muhiim tahay si aad awood ugu yeelatid ilaalinta danahaaga.
2. Saxitaanka, tirtirka iyo xaddidaadda ka shaqeynta xogta shaqsiyeed
Haddii aan ka baaraandegno macluumaadkaaga shaqsiyeed ee adiga kugu saabsan ee khaldan, aan dhammaystirnayn ama aan loo oggoleyn in laga shaqeeyo, waxaad dalban kartaa inaan saxno ama tirtirno macluumaadka aan dhammaystirnayn.
Waxaan ka jawaabi doonnaa su’aalaha ku saabsan marin u helka ama xuquuqaha kale ee hoos yimaada Sharciga Xogta Shakhsiyeed iyada oo aan dib loo dhigin oo aan ka dambayn 30 maalmood laga bilaabo maalinta baaritaanka la helay, ilaa ay duruufo gaar ahi ay ka dhigaan wax aan macquul aheyn in laga jawaabo baaritaanka muddadan loo qabtay. Xaaladdaas, waxaan ku siin doonnaa jawaab hordhac ah macluumaad ku saabsan sababta dib u dhaca iyo waqtiga suurtagalka ah ee jawaabta la bixin karo.
Waxaad sidoo kale xaq u leedahay inaad ka dhiidhid habka aan u shaqeyno ee macluumaadkaaga. Haddii ay soo baxdo in macluumaadku khaldan yahay ama aanu dhammaystirnayn, ama in aannu ka baaraandegno xogta shakhsiga ah ma lihin saldhig aan ku shaqeyno, waxaad xaq u leedahay inaad dalbato inaan saxno, ku darno ama tirtirno macluumaadkan 30 maalmood oo shaqo gudahood ka dib markaan helno baaritaan ku saabsan tan. Waxaad xaq u leedahay inaad dalbato in habeynta xogta shakhsiga ah la xadido inta lagu jiro mudada aan isticmaalno si loo hubiyo saxnaanta howsha.
3. Ka noqoshada ogolaanshaha
Xaaladaha marka ka shaqeynta xogtaada shaqsiyeed ay ku saleysan tahay ogolaansho, waad la noqon kartaa ogolaanshahaaga markasta oo aad rabto.Macluumaadkeena oo daboolaya ogolaanshaha ayaa markaa istaagaya, wixii macluumaad shakhsi ah ee la xiriira ogolaanshaha waa la tirtirayaa. Markii oggolaanshaha laga noqdo, ma saamaynayso sharcinimada hawsha la qabtay ilaa ogolaanshaha laga noqdo.
4. Wareejinta xogta
Waxaad xaq u leedahay inaad codsato bixinta macluumaadkaaga shakhsiyeed qaab mashiin-akhrin ah si aad ugu awooddo inaad tan ugu dirto dhinac saddexaad. Bixinta macluumaadka waxay u baahan tahay codsi qoraal ah, eeg macluumaadka xiriirka hoose.
Wax ka beddelka bayaanka
Waxaan beddeli karnaa macluumaadka asturnaanta waqti ka waqti, taariikhda ugu dambeysa ee isbeddelka waxaa had iyo jeer lagu muujiyaa dusha sare ee bayaanka. Mararka qaarkood waxaan sidoo kale ku siin karnaa ogeysiis bogga internetka ama qaab kale.
Masuul ka ah howsha iyo macluumaad dheeri ah
Qofka lala xiriirayo:
Red Sea Energy AS ,
Stalsberggata 1 1467 Strømmentalsberggata 1 1467 Strømmen
Haddii aad aamminsan tahay inuu jiro jebin tilmaamaha, waxaad u dacwoon kartaa Kormeeraha Macluumaadka, macluumaadka xiriirka iyo macluumaadka kale waxaad ka heli kartaa www.redsea.energy